Balaa lolaa Kibba Eeshiyaatti muudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 100 darbe - NuuralHudaa
On Jul 16, 2019 8
Rooba cimaa kibba Eeshiyaa kessatti roobaa jiru hordofuun, balaa lolaa Indiyaa, Neppaal, Baangilaadhishi fi Paakistaan keessatti muudateen namoonni 100 ol kan du’an yoo tahu, ummanni miiliyoona 6 ta’u ammoo qe’ee fi qabeenya irraa kan buqqa’e tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Balaa lolaa kanaan Neeppal hunda caalaa kan miidhamte tahuufi, bu’uuraaleen misooma kanneen akka daandii, Sarara elektrikaa, manneen jireenyaa fi laffeen qonnaa kan barbadaayan tahuus ibsame.
Baangiladhish naannawa Cox Bizar jedhamu keessatti ammoo kaampileen baqattoonni Rohingiyaa miiliyona tokkoo ol keessa qubatan miidhamanii jiru. Haaluma kanaan manneen leemmanii 5000 tahan kanneen baqattoonni keessa qubatan, guutumaan guututti barbadaayuu Dhaabbanni Godaantota Addunyaa IOM beeksise.
Indiyaa keessattis laggeen guutuun gandoonni heddu kan liqimfaman tahuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun Paakistaan naannoo Kaashmiir keessattis lolaa naannichatti hammaataa dhufe kanaan namoonni 18 kan du’an tahuu odeeyfannoon ni mul’isa.
Balaan akkanaa kanaan duras naannicha yeroo heddu kan muudatu yoo tahu, keessumattu bara 2017 balaa wal fakkaatuun lubbuun namoota 800 ol kan dabre tahuu Rooytarsi gabaase.
July 6, 2022 sa;aa 6:34 am Update tahe